Akwụkwọ drywall Joint Mezie - China QuanJiang New ihe
Joint akwụkwọ teepu bụ a akwụkwọ teepu na center crease, arụpụtara na polished na mesikwuru eriri akwụkwọ iji hụ na a mma igbaso. Ọ e mere maka ojiji na nkwonkwo compound na Ntụle gypsum board nkwonkwo na nkuku tupu sere, texturing ma ọ bụ wallpapering.
QUANJIANG bụ otu n'ime ndị na-eduga na-emepụta na suppliers nke onye nke ụwa ma ama ika faiba glaasi drywall nkwonkwo akwụkwọ teepu na China, welcome ịzụta ma ọ bụ na n'ùkwù ahaziri drywall nkwonkwo akwụkwọ teepu mere na China na-esi na ya free sample anyị factory.
Ihe: mesikwuru eriri akwụkwọ
◆ Uru na Uru
* Mezie na-arụpụtara site a pụrụ iche fibered akwụkwọ kwukwara ike ọdụdọ nyere aka gbochie tearing, wrinkling ma ọ bụ ndinyanade mbịne.
* Akwụkwọ eriri egbu maramara n'ihi na mma igbaso.
* Mezie nwere nkenke-ekwekọghị center crease maka mfe na ezi nkuku ngwa.
* Na elu-mmiri na akọrọ ike, osisi ike nke akọrọ bụ ≥6.5KN / M, The ike nke mmiri na-≥2.5KN / M.
* Ugboro abụọ matting, nkwonkwo ike dị elu, nke kacha nta eriri adhesion bụ ihe na-erughị 50%.
* Laser perforation ma ọ bụ pin ụdị perforated, permeability dị mma, n'ụzọ dị irè na-ezere ekpepụsị na oyi akwa.
Onye ọ bụla mpịakọta na-acha ọcha igbe.
◆ Main Iji
E na Ntụle ma zoo nkwonkwo na nkuku, mfe dozie nkwonkwo nsogbu
Previous: Faiba glaasi ntupu maka Mozis
Osote: Faiba glaasi drywall Joint ntupu Mezie
kpọrọ nkụ Wall Joint Akwụkwọ Mezie
Akọrọ Wall Akwụkwọ Mezie
kpọrọ nkụ Wall Mezie
Drywallangle mkwado Mezie
Fibered Akwụkwọ Mezie
Faiba glaasi ntupu N'ihi Wall ágbá
Glass Fiber ntupu N'ihi Wall ágbá
Akwụkwọ Joint Mezie
Mesikwuru Fiber Akwụkwọ Mezie
Steel mesikwuru Akwụkwọ Mezie
Wall Repaire Metal faiba glaasi Fabric
Wall Mee faiba glaasi ntupu
Wall Ike Glass Fiber ntupu
Wall Mee ntupu